फेरि किन रिसाए मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी ?
अब्दुल्लाहले यसै हप्ता खेलाडीलाई आफू बसेको ठमेलको एक होटलमा बोलाएको र मौरिसससँग खेलमा खेलाडीलाई विभिन्न ‘होकवर्क’ दिएको र लिगमा बचेर खेल्न बताएको आरोप लागेको छ।
एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङलाई मेन्सन गरी उनकै कारण आफूले एन्फामा राजीनामा दिन गएको बताएका अब्दुल्लाहले धेरैपटक राजीनामाको घुर्की देखाएका छन् ।
नेपाल पहिलोपटक साफ फुटबलको इतिहासमा २८ वर्षपछि फाइनल पुग्दासमेत अब्दुल्लाहले आफू नेपाली टोलीमा नरहने घुर्की देखाएका थिए । यद्यपि उनले सन् २०२२ सम्म सम्झौता नवीकरण गरेका छन् ।
टी–२० विश्वकप छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपालले कहिले कोसँग खेल्नेछ ?
इरानले विश्वकप खेल्ने पक्का, अन्य कुन कुन देशले विश्वकपमा स्थान बनाए ? (नामावली)
मेसीबिनाको अर्जेन्टिनाले चिलीलाई हरायो
विश्वकप फुटबलमा १४ देश छनोट (सूचीसहित)